Samsung Galaxy Z Fold2will be released in2weeks. What can we expect from him? ﻿
Samsung Galaxy Z Fold2will be released in2weeks. What can we expect from him?
Samsung ဟာ Galaxy Z Fold2ကို လာမည့် ၂ပတ်အတွင်း စတင်ရောင်းချတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
Samsung ရဲ့ Galazy Z Fold2ဟာ August လ၊ ၅ရက်နေ့တွင်ကျင်းပမည့် Unpacked 2020 event တွင် စတင်မိတ်ဆက်သွားနိုင်ခြေရှိနေပါတယ်။ ဒီဖုန်းမော်ဒယ်နဲ့ပက်သက်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ ဘာတွေသိထားသေးပါသလဲ?
Display Supply Chain Consultant များရဲ့ CEO ဖြစ်သူ Ross Young က သူ့ရဲ့ Twitter ပေါ်တွင် အားလုံးကစောင့်ဆိုင်းနေကြတဲ့ August လ၊ 5ရက်နေ့တွင်ကျင်းပမည့် Samsung Unpacked event တွင် Samsung Galaxy Z Fold2ကိုထုတ်ဖော်ပြသသွားမှာဖြစ်တယ်ဟု သူ့ရဲ့ Twitter အကောင့်မှတစ်ဆင့်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ထိုနေ့တစ်နေ့တည်းတွင်ပဲ အဆိုပါကုမ္ပဏီဟာ Galaxy Note 20, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Buds Live နဲ့ Galaxy Tab S7 တို့ကိုလည်း မိတ်ဆက်ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးစောင့်ဆိုင်းနေကြ တဲ့ Fold2တွင် 7.59“ Display နဲ့ 2213 x 1682 pixel resolution နဲ့ 372 DPI, 120 Hz refresh rate တို့ပါဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ထိုဖုန်းကိုဝယ်ယူရန်စိတ်ဝင်စားနေသူများအနေနဲ့ Snapdragon 865 (သို့) 865+ processor နဲ့ 8GB RAM တို့ကိုလည်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။